Baiboly pejy 653 - Ny Baiboly
Voalohany < 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 Manaraka Farany
Romana toko 8 (tohiny)
30Ary izay notendreny no nantsoiny koa; izay nantsoiny no nohamarininy koa; izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. 31Inona àry no holazaintsika ny amin'izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika? 32Izy tsy nandala ny tena Zanany, fa nahafoy azy ho antsika rehetra, ka ahoana no tsy hanomezany antsika ny zavatra rehetra koa miaraka aminy? 33Iza no hiampanga an'izay voafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy 34ka zovy no hanameloka? Moa ny Kristy va, ilay efa maty, fa nitsangana tamin'ny maty, sy mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika?
35Koa iza àry no hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'ny Kristy? Fahoriana va, sa fahaterena, sa fanenjehana, sa fahanoanana, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? 36Araka ny voasoratra hoe: Hianao no amonoana anay isan'andro; mova tsy ny ondry famono no fihevitry ny olona anay. 37Amin'izany rehetra izany anefa, dia mihoatra noho ny mpandresy isika, amin'ny alalan'ilay tia antsika. 38Satria matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na ireo fahefana, 39na ny any ambony, na ny any ambany, na zava-boary hafa, dia tsy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesoa Tompontsika.
Romana toko 9
Fitiavan'i Paoly ny Jody - Ny tena Israely sy taranak'i Abrahama - Ny fifidianan'Andriamanitra ny olona - Ny niantsoana ny jentily noho ny ditran'ny Jody.
1Milaza ny marina ao amin'ny Kristy aho, ka tsy mandainga, ary ny Fanahy Masina sy ny hitsim-poko no vavolombeloko, 2fa malahelo mafy aho, ory lalandava ny foko, 3satria saiky niriko aza ny ho voaozona ho lavitra ny Kristy ny tenako, hamonjeko ny rahalahiko, izay havako araka ny nofo, 4dia ireo Isrealita, izay manana ny fananganan-janaka, sy ny voninahitra, sy ny fanekena, sy ny Lalàna, sy ny fombam-pivavahana, ary ny fampanantenana; 5azy koa ny Patriarka, sady avy aminy araka ny nofo ny Kristy, izay ambonin'ny zavatra rehetra, Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amena.
6Tsy dia ny tenin'Andriamanitra tsy akory no foana; fa izay taranak'Israely no tsy tena Israely avokoa, 7ary izay terak'i Abrahama no tsy zanany daholo, fa izao: Ny avy amin'Isaaka ihany no hantsoina ho taranakao; 8izany hoe: tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny fampanantenana no isaina ho taranaka. 9Ary toy izao no teny fampanantenana iray: Amin'ny herin-taona toy izao dia ho avy indray aho, ary hahazo zazalahy i Sarà. 10Ary tsy Sarà ihany, fa toy izany koa Rebekà, izay nanan-janaka roa tamin'ny lehilahy iray, dia Isaaka raintsika: 11satria mbola tsy teraka akory ireo, ka mbola tsy nanao soa na ratsy (mba tsy hiova ny laha-pifidianan'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fa amin'ny safidin'izy niantso), 12no nilazàna tamin-dravehivavy hoe: Ny zokiny hanompo ny zandriny, 13araka ny voasoratra hoe koa: Jakoba no tiako, fa i Esao no halako.
14Inona àry no holazaintsika: misy tsy fahamarinana va ao amin'Andriamanitra? Sanatria izany! 15Fa hoy izy tamin'i Moizy: Hamindra fo amin'izay tiako hamindram-po aho, ary hiantra izay tiako hiantrana. 16Koa tsy izay maniry na mihazakazaka, fa Andriamanitra mamindra fo no antony. 17Fa hoy ny Soratra Masina tamin'i Faraona: Ny hoentiko mampiharihary ny heriko, sy hanambarana ny anarako amin'ny tany rehetra no nananganako anao. 18Koa dia izay tiany hamindram-po no amindrany fo, ary izay tiany hohamafisim-po no hamafisiny fo.
19Fa hianao kosa hanao amiko hoe: Ka ahoana indray no anomezan'Andriamanitra tsiny, nefa tsy misy mahatohitra izay sitra-pony tsinona? 20Eisy! iza moa hianao, ry olombelona, no sahy hifamaly amin'Andriamanitra? Moa ny vilany tany va hanao amin'izay nanefy azy hoe: Nahoana aho no nataonao toy izao? 21Moa tsy tompon'ny tanimanga va ny mpanefy vilany, ka mahazo manao zavatra samihafa amin'ny vongana iray monja: ny iray moa, hohajaina, ny iray kosa hatao tsinontsinona? 22Koa maninona, raha te-hampiseho ny fahatezerany Andriamanitra, sy ta-hampahafantatra ny heriny, ka mbola naharitra tamim-pandeferana lehibe an'ireo fanaky ny fahatezerana nanoman-tena ho an'ny fahaverezana? 23na te-hampahafantatra ny haren'ny voninahiny koa izy, ka nanomana rahateo an'ireo fanaky ny famindram-po ho amin'ny voninahitra, 24dia ho antsika izay tsy nalainy tamin'ny Jody ihany, fa tamin'ny jentily koa?
25Izany indrindra no lazainy ao amin'i Osea hoe: Hiantso ny tsy oloko hoe oloko aho, sy ny tsy malala hoe malala, ary ny tsy namindram-po hoe namindram-po. 26Ary any amin'ny tany nilazana hoe tsy oloko hianareo, no hiantsoana ny any hoe zanak'Andriamanitra velona. 27Izany koa no iantsoan'Izaia mafy ny amin'Israely hoe: Na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza ny isan'ny zanak'Israely, dia izay sisa ihany no ho voavonjy. 28Andriamanitra dia faingam-panatanteraka ny teniny an-tsakany sy an-davany, ka hotanterahiny tokoa izany eto ambonin'ny tany. 29Ary izany no nilazan'Izaia rahateo hoe: Raha tsy namelan'Andriamanitry ny tafika taranaka isika, dia efa tonga iray lasitra tamin'i Sodoma, sy nanahaka an'i Gomora.
30Inona àry no holazaintsika? Ny jentily izay tsy nitady ny fahamarinana ity no nahazo ny fahamarinana, dia ny fahamarinana avy amin'ny finoana; 31fa Israely nitady lalàn'ny fahamarinana kosa, tsy tojo azy. 32Nahoana re? Satria tsy tamin'ny finoana, fa tamin'ny asa no nataony hahazoana azy; ka tafintohina tamin'ny vato manafintohina izy, 33araka ny voasoratra hoe: Indro, apetrako ao Siona ny vato manafintohina sy ny vatolampy mahasolafaka; fa izay mino azy ihany no tsy mba ho menatra.
Romana toko 10
Ny Kristy no anton'ny Lalàna - Ny finoana azy no làlam-pamonjena - Nahalala ihany ny Jody, ka tsy manan-kalahatra.
1Ry rahalahy, ny irin'ny foko sy angatahiko amin'Andriamanitra ho azy ireo, dia ny hahasoa ny famonjena. 2Fa vavolombelon'ny fahazotoany ho an'Andriamanitra aho, saingy fahazotoana tsy ara-pahalalana ny azy; 3satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy, ka nitady hanamarin-tena, fa tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. 4Ny Kristy ihany anefa no anton'ny Lalàna, mba ho fanamarinana an'izay rehetra mino.
5Izany no nilazan'i Moizy fa ny olona manatanteraka ny fahamarinana avy amin'ny Lalàna no ho velona amin'izany; 6ary izao kosa no lazain'ny fahamarinana avy amin'ny finoana: Aza manao anakam-po hoe: Iza no hiakatra any an-danitra? (dia ny hampidina ny Kristy izany); 7na hoe: Iza no hidina any amin'ny tevam-be? (dia ny hampiakatra ny Kristy avy amin'ny maty izany).
Pejy: Voalohany < 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2931 seconds